Yiyiphi i-software engcono kakhulu yokuthengisa intengiso kwi-Amazon yakho?
Wonke umntu uthanda ukwenza imali, kwaye i-Amazon inika onke amathuba okukwenza. Yingakho ukuqhuba ishishini kwi-Amazon lixhaphake kakhulu kwiintsuku zethu. Uninzi lwamashishini e-ecommerce avelisa iimveliso zawo kwi-Amazon ezenza le nqanaba likhuphisane kakhulu. Ngaphezu koko, i-Amazon idinga ukulandela izikhokelo zokusebenza eziphambili ukwenzela ukuba iimveliso zakho zibonwe kwi-search.
Ukuba unomtsha kwi-Amazon, kunokuba nzima ukuba ufike kwi-TOP ye-Amazon yophando ngaphandle kokuphumeza nayiphi na i-software ye-Amazon. Kule ngqaku, siza kuxubusha isofthiwe esithengisa i-intanethi yezona zinto zingathanda ukuthengisa kwi-Amazon njengepro.
Izizathu eziphambili zokuba kutheni ufuna ukusebenzisa i-software ye-Amazon
Ukuze wenze inzuzo enkulu, kufuneka utyalomle kuwe. I-Amazon imayelana nokutyalomali kwangaphambili, kokubili ixesha kunye nemali. Ukuba ubeka le miba kumsebenzi wakho, uya kutsala inzuzo engenziwanga nyanga zonke. Nangona kunjalo, sihlala sidinga ngaphezulu; yindlela esebenza ngayo ihlabathi.
Kuphela iiyure ezingama-24 ngosuku, kwaye nabathengisi be-Amazon bafuna ukulala. Ngoko, ukuba ulawula zonke izinto uqobo, usengozini ukulahlekelwa ngumsebenzi wakho. Khawucinge ukuba kufuneka wenze uphando, ukukhawuleza, ukulandelela nokuhlalutya ngokwakho, ukuthelekisa iinkcukacha ezininzi. Kwaye kuthekani ngokupakisha nokuthumela amakhulu amabango ngosuku? Hayi, akunakwenzeka ngokwenene. I-Amazon ingenza lula ubomi bakho kukubonelele ngokuzaliseka kobugcisa. Kuthetha ukuba yonke imveliso yakho yokuthumela, ukuhambisa kunye nokuxhasa iya kuthathwa yi-Amazon. Ungathumela iimveliso kwiindawo zokugcina iimpahla kwaye ugxininise kuphela kwi-Amazon yakho yokugcina ibhizinisi. Nangona kunjalo, iyingxenyana yemfazwe. Zonke iimfuno zoshishino zikhula, ngoko kufuneka utyalomle inxalenye enkulu yomsebenzi wakho wosuku kwi shishini lakho lokuphuhlisa. Kufuneka usebenze uluhlu lwakho, khangela uphendlo lwamagama abalulekileyo ajoliswe kuyo, izikhundla zomkhiqizo wokulandelela kwi-Amazon SERP, uqalise izinto ezininzi kwaye uphucule iinkonzo zenkxaso yabathengi ukuze ukhulise ulwazi lwakho lwezentengiso kwaye ukhuphukise imali. Kwaye konke oku kuthatha ixesha elininzi kunye nemigudu. Ngoko ufuna ezinye iinkonzo ezongezelelweyo eziza kukunceda ukulawula zonke ezi zinto. Khumbula, ukuba kufuneka usebenze kwishishini lakho, kungekhona kulo. Njengomthetho, abathengisi abalawula ubutyebi obukhulu, bonke ngaphandle kokuchukumisa imveliso okanye isilumkiso malunga neenkcukacha ezincinci.
Ngoko ke, kufuneka ube neenguqu zempilo yakho yentuthuko ye-Amazon. Unokusebenzisa abahlalutyi basekhaya kunye neengcali ze-SEO okanye uthembele kwi-automation ne-software ye-Amazon. Ke mna, ukhetho luyabonakala. Ukusebenzisa izixhobo ze-intanethi, uya kukwazi ukwenza yonke into ngokuchanekileyo ngaphandle kokuqhubeka. Ingundoqo kwi-Amazon yakho impumelelo. Ngoko-ke, makhe sixoxe ngokufaneleka kwe-Amazon kunye nesofthiwe yophando eya kuza kulungele wena kunye nophuhliso lwakho lwe-Amazon.
I-software ye-Amazon engcono kwi-rankings yakho yokuphucula
Kufuneka uqale umdlalo wakho we-ecommerce njengomqoqo. Ngoko, kubalulekile ukhethe i-niche yemakethe enenzuzo kakhulu kunye neemveliso ozithengisa ngazo. Ukwenza lula lo msebenzi, ungasebenzisa ithuluzi leJungle Scout. Esi sixhobo sinokukunceda ukufumana iimveliso ze-Amazon ongayinceda, ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kokuziqhelanisa. Ukusebenzisa ithuluzi le-Jungle Scout, uya kunciphisa umngcipheko kwaye ukwandisa inzuzo njengoko kunceda ukufumana amathuba axhaswa yi-Amazon ethembekileyo yedatha yokuthengisa kwishishini kwaye ugweme iimpazamo ezinkulu. Lolu hlelo lokusebenza lwewebhu lubonelela inkqubo yefayile yokuhlola i-Amazon iimveliso kunye nedatha enkulu yolwazi. Apha unokukhetha iindidi, ekujoliswe kuzo kwiSahluko seSeller Best, sales, reviews, njalo njalo.
Kukho iindlela ezimbini zokusebenzisa indlela yokusebenzisa isofthiwe ye-Jungle Scout - njenge-app yewebhu, okanye isandiso se-Chrome.
Ukusebenzisa njenge-app yewebhu, ufumana ithuba lokufumana iimpahla ezixhasayo kunye nemveliso kuyo yonke ikhathalogu ye-Amazon. Ukongezwa kukunika ithuba lokucoca yonke i-database yase-Amazon ngodidi, intengo, ukuthengisa, kunye nezinye iimetriki ukwenzela ukuba ufumane izinto ezingaphunyekiyo onokuzifaka.
Ukuba usebenzisa i-Jungle Scout ithuluzi njengesandiso se-Chrome, uya kukwazi ukuhlola nokuqinisekisa iimveliso zeemveliso njengoko uphephaza. Uya kukwazi ukujonga intengo nganye yemveliso, ukuthengiswa okuqikelelwayo, inani lokuphonononga kunye nedatha eyongezelelweyo yokufanisa kwemveliso.
Phakathi kokungalungi kwesi sixhobo, ndiyakwazi ukubalisa ukuhlawula okulandelayo, ukuphela kweentsuku ezisixhenxe kuphela kwaye akukho nedatha epheleleyo.
Xa unemiba yemveliso ofuna ukuyithengisa, kufuneka ufumane iimveliso zenyama. Ukufumana iimveliso kunye nokufumana iisampuli kukukhupha okungenakukhunjulwa okungenakukuphoswa kwinqanaba lokuqala le-Amazon marketing campaign. Lo msebenzi uvame ukwesabisa, ngokuyininzi kuba abaninzi ababoneleli bangaphandle. Nangona kunjalo, ukufumana umthengisi olungileyo kunokulula njengoko ucinga. Makhe sibhale ezinye izixhobo ezinokukunceda ngalo msebenzi.
I-Alibaba iyiqonga elidumileyo laseTshayina apho ungathenga khona ngobuninzi. Uninzi lwezinto ezisekelwe apha zenziwe e-Asia. Yingakho ixabiso lawo aliphezulu xa lifaniswa nemveliso eyenziwa e-US naseYurophu. Ngoko, u-Alibaba yindlela yokubheja yakho. Ekuqalekeni, kubonakala kunzima, kodwa kufuneka uqalise. Okokuqala, kufuneka uhambise izicelo zokuthenga, uze ufune iminikelo yemveliso kunye noqhagamshelwano nomthengisi nge-imeyili okanye nge-Skype. Okokuqala, kufuneka ucele iimveliso zeesampuli ezivela kubaboneleli abahlukeneyo ukuze bakwazi ukuthelekisa umgangatho. Kufuneka uqaphele ukuba abaninzi abathengisi beenkampani zorhwebo ezingenza izinto zibe lula kodwa zibiza kakhulu. Ukongezelela, kubalulekile ukukhankanya ukuba u-Alibaba ngokuyinhloko ngu-Aliexpress ngeesampuli kunye nomlinganiselo omncinci kuphela kwimilinganiselo. Nangona kunjalo, eli sayithi livumelekile ngakumbi kunamanye amaqonga aseTshayina.
Phakathi kokuxhamla kunye no-Alibaba, ndiyakwazi ukubalula oku kulandelayo:
kukho ezininzi izigameko.
Ezi zinto eziyimfuneko ziyakunceda wenze isiqalo esihle. Nangona kunjalo, ukuveliswa ngokuqhelekileyo kuthatha ixesha. Ngoko, unokuchitha ixesha elifanelekileyo ngokuzinikela ekudaleni uluhlu nokulungiswa Source .